Alexander Dumas baba nemwanakomana. Zviyeuchidzo Zvimwe zvirevo. | Zvazvino Zvinyorwa
Alexander Dumas baba nemwanakomana. Zviyeuchidzo Zvimwe zvirevo.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nyaya
El 24 de julio de 1802 akazvarwa Alexander dumas uye makore 22 gare gare, a Chikunguru 27 zvakare, akazvarwa mwanakomana wako zvakare Alejandro. Ivo vanogona kunge vari Alexandros inonyanya kuzivikanwa yeFrance uye zvirokwazvo maviri eiyo vanyori vakakurumbira venguva dzese, kunyanya baba.
Pachave paine vamwe vanogara pano pasi avo haana kuverenga bhuku rake. Asi zvirokwazvo hazvigoneke kuti kune mumwe munhu asina kuona imwe firimu zvichibva pamanoveli ake. Uye kana paine mumwe munhu asina kunzwa nezvemabhuku iwayo ipapo, zviri izvo pasina kupokana havasi vanobva pasi rino. Prolific uye inofananidzwa neisingagumi adventures kana nyaya dzepamusoro uye dzinorwadza rudo. VaDuma hazvikundiki uye, nemutemo, rimwe remabhuku ake rinofanira kuverengerwa kana kuverengwa zvekare gore rega rega. Ngatigarei mamwe emitsara yake.
Alexander Dumas baba
Zvese zveimwe, chimwe chevose.
Madmen uye magamba, maviri marudzi emamononi anotaridzika zvakafanana.
Vadiwa vatinorasikirwa havasi kuzorora pasi pevhu, asi isu tinovatakura mumoyo yedu.
Kune maviri anotaridzika: Kutaridzika kwemuviri dzimwe nguva kunogona kukanganwa, asi izvo zvemweya zvinorangarira nguva dzose.
Muzhinji, kuraira hakubvunzwe kune vamwe kwete kwekutevedzera; kana, kana zvikateverwa, ndeyekuti uve nemumwe munhu anogona kupihwa mhosva yekuvapa.
Benzi hariseka seka zvakafanana nemurume akavimbika, munyengeri haachemi nemisodzi semurume wekutenda kwakanaka. Yese manyepo imask, uye kunyangwe zviite sei masiki akagadzirwa, munhu anogona nguva dzose, aine tarisiro shoma, achisiyanisa kubva kumeso.
Kunyarara ndiwo mufaro wekupedzisira weasina kunaka; chenjera kuisa mumwe munhu, chero angave ari iye, munzira yemarwadzo ako; avo vanoda kuziva vanodzikamisa misodzi yedu senhunzi dzinoburitsa ropa kubva kunondo yakakuvadzwa.
Pachagara paine miromo inotaura chimwe chinhu moyo uchifunga chimwe.
Humambo hwangu hwakakura kunge hwenyika, nekuti ini handisi muItari, kana chiFrench, kana muIndia, kana muAmerican, kana Spanish; Ndiri wepasi rose.
Zvakaipa zvese zvine mishonga miviri; nguva nekunyarara.
Maronda etsika ane hunhu hwekuti akavanzwa, asi haavhare; inogara ichirwadza, ichigara yakagadzirira kubuda ropa painobatwa, vanoramba vari vapenyu uye vanovhura mumoyo.
Chinhu chinonyanya kufarira muhupenyu chiitiko chekufa.
Ivo chete ndivo vanoziva kunyanyisa kwedambudziko vanogona kunzwa mufaro wakanyanya. Izvo zvinodikanwa kuve waida kufa, kuti uzive kutapira kwehupenyu.
Alexander Dumas mwanakomana
Moyo ndicho chinhu chekupedzisira chinouya kubva pasi uye ndangariro chinhu chekupedzisira chinobva pamoyo.
Ndinosarudza vakaipa pane izvo zvisina kuchena, nekuti izvo, zvirinani, zvinosiya imwe nzvimbo yekufema.
Kune mukadzi uyo asina kudzidziswa zvakanaka nedzidzo, Mwari anenge nguva dzose anovhura nzira mbiri dzinomutungamira, izvo zvinorwadza uye rudo.
Unyanzvi hunoda kusurukirwa, kusuwa kana kuda. Iruva dombo rinoda mhepo ine hasha nenzvimbo dzakaomarara.
Zvinenge zvisina zvazvinobatsira kuti nyika ichembere dai isiri yekuzvigadzirisa.
Mari ndiro chete simba risingambokurukurwa nezvaro.
Chero chinhu chinogona kuchinjika zviri nyore chinogona kusiyiwa nyore nyore.
Ini handina kupfuma zvakakwana kukuda nenzira yandinoda kana murombo zvakakwana kukuda nenzira yaunoda.
Ndeipi nzira dzakawanda idzo moyo dzaunotora uye kuti zvikonzero zvakawanda zvainowana kuti iende kune izvo zvainoda!
Mhinduro idzo dzinomirirwa nemoyo wese dzinogara dzichiuya kana munhu asipo pamba.
Vechidiki vanogara vachibaira zvido zvepachokwadi vachida zvido zvisina chokwadi.
Ane hutsinye uye anokurumidza sei murume kana imwe yekusuwa kwake kusuwa achinzwa kukuvadzwa!
Zvibvumirano hazvigone kuitwa nguva dzose pazuva ravanosaina.
Unogona here kuona chimwe chinhu chinosuwisa kupfuura kuchembera kwehunhu, kunyanya mumadzimai?
Iwe wagara uine hudiki, zvisinei zvawave.
Zvinotapira sei kunyengetedzwa nezwi rinodikanwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Alexander Dumas baba nemwanakomana. Zviyeuchidzo Zvimwe zvirevo.
Vanoti kuverenga zvekare kunotsungirirwa nemabhuku akanaka chete; pasina mubvunzo "Vatatu Musketeers" muenzaniso weizvi. Handingataure gore rega rega, asi matatu kana mana ese zvinofadza kutanga zviitiko zvavo. Shuwiro yakanakisa.
The zvikuru chiratidzo mabasa Alexander Dumas
5 mabhuku emahombekombe awakambofamba uchienda